Xog:-Badbaado qaran oo dhaqdhaqaaq xoogan ka wada Muqdisho iyo jeedkooda! | XAL DOON
Home NEWS Xog:-Badbaado qaran oo dhaqdhaqaaq xoogan ka wada Muqdisho iyo jeedkooda!
Xog:-Badbaado qaran oo dhaqdhaqaaq xoogan ka wada Muqdisho iyo jeedkooda!
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo-wareedyo katirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka, waxaa magaalada Muqdisho ka socda dadaallo ay wadaan guddi saraakiil ah oo ka socda ciidankii Badbaado Qaran ee ka dagaalamay Waqooyiga Muqdisho.
Saraakiishan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay bilaabeen dadaallo ay kula kulmayaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Xogta ayaa tilmaamay in saraakiishaan oo ka soo horjeeda tallaabooyinka uu qaaday Madaxweyne Farmaajo ay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya u wadaan talooyin ku aadan in awood ciidan looga hortago dhaq-dhaqaaqyada sharciga baalmarsan ee ka socda xafiiska Farmaajo.
Sidoo kale saraakiishaan ka tirsan ciidankii Badbaado Qaran ayaa la sheegay in ay sheegeen in Muqdisho ay u muuqato magaalo aan dagaal hureyn ilaa laga qabto Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiskiisa uu ka jiro mashquul badan ayaa la sheegay in aan la ogeyn sida uu ka yeeli doono dalabka kulanka ay codsadeen saraakiishaan.
Xubnaha ka socda guddiga Badbaado Qaran waxaa kamid ah Janaraa Gacma-dulle, Janaraal Koronto, Korneel Xareed Raage iyo Korneel Cusmaan Xaadoole oo dhamaantoodba ah saraakiishii hogaamineysay ciidankii fashiliyey muddo.
Rooble ayaa la sheegay inuu rumeysan yahay in ciidanka yar ee diidan in ay ka tagaan aagga xarunta NISA, looga saari karo wada-hadal, oo aysan qasab aheyn dagaal dhiig uu ku daato.
Lama oga xaalada ay ku dambeyn karto Muqdisho oo wajaheysa xiisad culus oo ka dhalatay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil oo lagu eedeeyay taliska hay’adda NISA.
Dhankale wasiirka cusub ee amniga Cabdullahi Maxamed Nuur ayaa wada dadaalo xooggan oo uu xilka kula wareegayo isaga oo doonaya in uu adeegsado cutub ka tirsan ciidankii badbaado qaran oo ay hayb ahaan ay isku beelyihiin.
Qorasha waxa ku jira in wasiiru dowlaha amniga guddaha Farxaan oo beel ahaan ka soo jeeda Cayr Habargidir uu xilka ku wareejin doono wasiir Cabdullaahi sidaasna looga maarmayo Xasan Xudumay Jimcaale.
AMISOM iyo milatariga Soomaaliya dajiyay qorshe midaysan oo ay ku wajahayaan Al Shabaab.
Fahad Yaasiin oo sharaf dil ku sameeyay Cumar Finish, G. Xijaar iyo Gen Owodwaa.
Uhuuro Kenyatta, Muxuu ka sheegay shirka golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay?
Doorashada golaha shacabka oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabayo.
Faahfaahino kasoo baxaya weerar madaafiic ah oo lagu qaaday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Dowladaha Soomaaliya & Malaysia oo kawada hadlay Ajnabi ku xiran Muqdisho.